”မန္တလေးမြို့အနှံ့ မီးလင်းရန် ”လမ်းမီးတိုင် (၇၀၀၀)ကျော်” ထပ်မံစိုက်ထူမည်”….. - TheeSayChin
”မန္တလေးမြို့အနှံ့ မီးလင်းရန် ”လမ်းမီးတိုင် (၇၀၀၀)ကျော်” ထပ်မံစိုက်ထူမည်”…..
Zawgyi Font ဖှငွ့ဖတရွနွ
မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရနွ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ ထပမွံစိုကထွူမညွ၊
လကရွှိတှငွ မှို့တှငွး အဓိကလမွးမမှား၌ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ စိုကထွူထားပှီး ……
မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရေး ဆောငရွှကရွာတှငွ စညပွငသွာယာ၏ ဘဏဍြာငှတဈခေုတညွးဖှငွ့ လုပဆွောငမွညဆွိုပါက (၅)နှဈခနွ့ ကှာမှငွ့နိုငပွှီး အလှူရှငမွှား၏ ပါဝငလွှူဒါနွးမှုကှောငွ့သာ ယခုကဲ့သို့ (၂)နှဈအတှငွး အပှီးဆောငရွှကနွိုငခွှငွး ဖှဈကှောငွး ဦးကှောဆွနွးမှငွ့က ပှောသညွ။
“အလှူရှငတွှရေဲ့ အလှူကလညွး တောတွောမွှားပါတယွ။ သိနွးပေါငွးကို သောငွးနဲ့ခှီနတောပါ”ဟု ဦးကှောဆွနွးမှငွ့က ပှောသညွ။ . မနတြလေးမှို့အနှံ့ မီးလငွးရနွ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ ထပမွံစိုကထွူမညွ၊
လကရွှိတှငွ မှို့တှငွး အဓိကလမွးမမှား၌ လမွးမီးတိုငွ (၇၀၀၀)ကှောွ စိုကထွူထားပှီး
“အလှူရှငတွှရေဲ့ အလှူကလညွး တောတွောမွှားပါတယွ။ သိနွးပေါငွးကို သောငွးနဲ့ခှီနတောပါ”ဟု ဦးကှောဆွနွးမှငွ့က ပှောသညွ။
unicode version . .
Unicode Font ဖှငွ့ဖတရွနွ
မနတှလေးမှို့အနှံ့ မီးလငှးရနှ လမှးမီးတိုငှ (၇၀၀၀)ကှောှ ထပမှံစိုကထှူမညှ၊
လကရှှိတှငှ မှို့တှငှး အဓိကလမှးမမှား၌ လမှးမီးတိုငှ (၇၀၀၀)ကှောှ စိုကထှူထားပှီး ……
မနတှလေးမှို့အနှံ့ မီးလငှးရေး ဆောငရှှကရှာတှငှ စညပှငသှာယာ၏ ဘဏဍှာငှတဈခေုတညှးဖှင့ှ လုပဆှောငမှညဆှိုပါက (၅)နှဈခန့ှ ကှာမှင့နှိုငပှှီး အလှူရှငမှှား၏ ပါဝငလှှူဒါနှးမှုကှောင့သှာ ယခုကဲ့သို့ (၂)နှဈအတှငှး အပှီးဆောငရှှကနှိုငခှှငှး ဖှဈကှောငှး ဦးကှောဆှနှးမှင့ကှ ပှောသညှ။
“အလှူရှငတှှရေဲ့ အလှူကလညှး တောတှောမှှားပါတယှ။ သိနှးပေါငှးကို သောငှးနဲ့ခှီနတောပါ”ဟု ဦးကှောဆှနှးမှင့ကှ ပှောသညှ။ . မနတှလေးမှို့အနှံ့ မီးလငှးရနှ လမှးမီးတိုငှ (၇၀၀၀)ကှောှ ထပမှံစိုကထှူမညှ၊
လကရှှိတှငှ မှို့တှငှး အဓိကလမှးမမှား၌ လမှးမီးတိုငှ (၇၀၀၀)ကှောှ စိုကထှူထားပှီး
“အလှူရှငတှှရေဲ့ အလှူကလညှး တောတှောမှှားပါတယှ။ သိနှးပေါငှးကို သောငှးနဲ့ခှီနတောပါ”ဟု ဦးကှောဆှနှးမှင့ကှ ပှောသညှ။
နှာခေါင်းနဲ့ Vote မပေးနဲ့ပြောလည်း ပရိသတ်က သူကြိုက်တာ သူပေးနေမှာပဲဆိုတဲ့ ပိုးမီ
Mobile Lengend မှာ Mythic ရောက်သွားလို့ ပျော်နေတဲ့ မကြီးစိုး